Yevatsva Nhungamiro kune Bhora reKukwikwidza Dhaniki | Fred Astaire
Yevatsva Nhungamiro kuBallroom Dhanzi Makwikwi
KNIGHTtime naStephen Knight, FADS Mutevedzeri weMutungamiri uye Executive Dance Director
Nemakore angu anopfuura makumi maviri eruzivo rwekudzidzisa, ndinoziva zvinogona kutyisidzira mudzidzi mutsva wekutamba kuita sarudzo yekupinda muFred Astaire Dance Studios Dance Makwikwi. Kunyangwe iri yedunhu, yepakati-yedunhu kana yenyika yekutamba chiitiko, pane kuenderana kwekuti makwikwi edu eDhanzi akarongwa uye anomhanya sei, asi zvinenge zvese zvingaite kunge zvisina kujairika. Saka heino nhungamiro yangu yekukubatsira kuti uwedzere kuva nechivimbo, uye wakagadzirira kutanga yako yemakwikwi yekutamba rwendo:
Chinhu chekutanga chandinoda kuti iwe uite kushaya hanya izita rekuti 'makwikwi'. Pane kudaro, funga nezvazvo sechiitiko apo vadzidzi veese mazera uye mazinga ehunyanzvi vachange vachiratidza kuda kwavo kutamba.
Tarisa pane kuita rakanakisa basa raunogona kuita, uye usapedze nguva kana simba kuzvienzanisa nemumwe munhu. Iwe ndiwe mutongi wako wepamusoro, uye makwikwi ako chete!
KuFred Astaire Dance Studios, tinokurudzira vadzidzi vedu kuti vatore chikamu mumakwikwi eDance, nekuti haasi ekungonakidzwa chete, anonakidza uye asingakanganwiki - ivo zvakare vachakubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvekutamba. Basa redu nderekubatsira iwe kuti ugamuchire mabhenefiti auri kutsvaga. Runako rweFred Astaire Dance Studios Dance Makwikwi ndechekuti iwe uchave uine ruzivo rwakakura kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Zviitiko zvedu zvinouya zvakakwana nekuyevedza, kunakidzwa, kutamba, hushamwari hutsva, uye ndangariro dzinofadza kugara kweupenyu hwese. Mudzidzisi wako wekutamba achakutungamira nhanho dzese dzenzira, kusanganisira:
Zvekupfeka - pane yekutamba pasi, uye bvisa
Kuti chiitiko chichafamba sei
Iyo iri-padanda nzvimbo
Mavhidhiyo & Photography
Bvudzi & Makeup
Kuisa zvaunotarisira semunhu mutsva
Mushure mekunge maita sarudzo yekupinda - nemwedzi mwedzi makwikwi asati aitika - iwe nemurairidzi wako wekutamba muchatanga kuita gadziriro dzekufamba & kuronga kuenda, uye kusarudza nezvekutamba kwako kwevatongi. Inzwa wakasununguka kubvunza mibvunzo yakawanda sezvauinayo - chikamu chebasa redu kukuita iwe mukwikwidzi ane ruzivo. Semutambi wekutanga, yeuka kuti iwe uchakwikwidza chete nevamwe vatsva vakave neyakaenzana chiyero chekudzidziswa kwekutamba senge iwe. Saka ino ndiyo nguva yekuratidza hunyanzvi hwese hwawanga uchidzidza, uye unakirwe! Izvi zviitiko zvinotora yako yekutamba kutamba kune imwe nhanho yehunyanzvi, ichikubvumidza iwe kuti uve nepfungwa yakajeka yekuzvikudza, kuvimba uye muridzi. Uchafambira mberi kunyange kumberi kubva kumatondo eVatongi, uye kubva pakuona vamwe vatambi vePro / Am mubhodhi. Uye, iwe unozoita shamwari nyowani uye uve chikamu chew studio yako yemakwikwi timu! Ndinokurudzira munhu wese kuti asangane nechero chiitiko chedu chekutamba uye kuti ndive neushingi hwokubuda kunze nekutamba. Ndinovimbisa, iwe unenge uchizvikudza zvikuru pamusoro pako.
Chinhu chekupedzisira chandiri kuda kutaura, yeuka kuti ichi ndicho chinhu chako chekutandarira kwete rako basa. Tipe mukana wekukuratidza nyika ine mikana yakawanda inounza mufaro mutsva muhupenyu hwako. Ndinotarisira kuona kunyemwerera kwako kwakanaka kunze kwekutamba pasi uye tarisa paunotanga rwendo rwako.
Stephen Knight ndiye Mutevedzeri weMutungamiri & Executive Dance Director naFred Astaire Dance Studios. Iye anoshandawo seDance Coach uye Regional Franchise Director weiyo FADS Wisconsin Dunhu. Mukwikwidzi weNational panguva yemakwikwi ake makore, Stefano anonyanya kuzivikanwa nekuda kwekutora mifananidzo, uye nekugadzira chikamu chakakura cheFred Astaire Dance Studios Silver Syllabus. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve nhengo dzeFred Astaire Dance Studios International Dance Council, taura nesu. Uye kuti utange parwendo RWAKO rwekutamba, bata Fred Astaire Dance Studios nhasi.